Hawaii na-ebupụta ndị njem usoro ọgwụ mgbochi ewepụrụ ọgwụ ndị a gbara ọgwụ mgbochi na US na US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Hawaii na-ebupụta ndị njem usoro ọgwụ mgbochi ewepụrụ ọgwụ ndị a gbara ọgwụ mgbochi na US na US
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Usoro ihe omume ahụ na-enye ndị njem ọgwụ mgbochi ọgwụ na US na US Territories iji gafere oke mgbochi nke steeti na ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi.
Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi na US ma ọ bụ US Territories nwere ike isonye na mmemme ahụ na-amalite na 15th ụbọchị mgbe ọgwụ ogwu Pfizer ma ọ bụ Moderna gachara nke abụọ ma ọ bụ otu ọgwụ ogwu Johnson na Johnson.
Ndị njem ga-eweta nnukwute akwụkwọ nke ịgba ọgwụ mgbochi ha iji gosipụta ihe nlele n'ọnụ ụzọ ámá tupu ịbanye na / ma ọ bụ mgbe ha rutere Hawaii.
Banye na iwu iwu dị na Safe Travels Hawaii.
Hawaii na-emecha nkwadebe maka mmalite nke July 8 nke Steeti Hawaii'Usoro mmemme ọgwụ mgbochi maka anụ ụlọ, ndị njem njem Hawaii gbara ọgwụ mgbochi na United States ma ọ bụ US Territories. Usoro ihe omume a na-enye ndị njem a ohere ịgafere iche iche nke steeti chọrọ site na akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi.
Ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi na US ma ọ bụ US Territories nwere ike isonye na mmemme ewezuga na-amalite na 15th ụbọchị mgbe ọgwụ nke abụọ nke Pfizer ma ọ bụ Moderna gachara - ma ọ bụ malite 15th ụbọchị mgbe ha nwetachara otu ogwu ogwu Johnson na Johnson.
Na mgbakwunye, ndị njem ejidere njem Hawaii kwesịrị:
Bulite otu n'ime akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi atọ na akaụntụ nchekwa njem ha dị na Hawaii, tupu ị gaa Hawaii. Otu n'ime akwụkwọ ndị na-esonụ ga-ebugo:
Kaadị CDC COVID-19 nke ọgwụ mgbochi ọrịa
VAMS (Usoro ọgwụ nchịkwa ọgwụ mgbochi) ebipụta OR
ODdị DOD DD 2766C
Ebe nchekwa dijitalụ a na - eme njem na - enye ohere ka etinye akwụkwọ ọgwụ mgbochi maka njem ndị rutere Hawaii na July 8 na gafee.
Banye aka na iwu iwu dị na Safe Travels Hawaii, na-akwado akwụkwọ ebugoro bụ eziokwu na ọ bụ eziokwu.
Weta akwụkwọ siri ike nke akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi ha iji gosipụta ihe ngosi n'ọnụ ụzọ mbata tupu ịbanye na / ma ọ bụ mgbe ị rutere Hawaii. Ndị nyocha ga-enyocha / nyochaa akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi, akara njimara foto, aha na DOB yana gosipụta na egosipụtara aka.
MARA: Childrenmụaka nọ n'okpuru afọ 5 achọghị ka ha nwalee ma a gaghị ekewapụ ha iche ma ọ bụrụ na ha na onye toro eto na-eme njem tupu njem ma ọ bụ ọgwụ mgbochi. Childrenmụaka ndị gbara afọ 5 na okenye ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi ga-esonye na Mmemme Nleba Anya Nleta ma nwalee Onye Mmekọ Ule Tụkwasịrị Obi iji zere iche iche ụbọchị 10.
Steeti ahụ mepere usoro mmemme ịgba ọgwụ mgbochi maka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi na Steeti Hawaii, na June 15.
Ihe omume a anaghị ekpuchi ndị njem mba ofesi.